Iinqwelomoya zeLufthansa Group zongeza iinqwelomoya ezintsha ezingama-440 zase-US, eSpain, ePortugal naseScandinavia ngeKrisimesi kunye noSuku loNyaka oMtsha.
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Iinqwelomoya zeLufthansa Group zongeza iinqwelomoya ezintsha ezingama-440 zase-US, eSpain, ePortugal naseScandinavia ngeKrisimesi kunye noSuku loNyaka oMtsha.
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseJamani zokuPhula • iindaba • abantu • IPortugal Breaking News • Ukwakha kwakhona • Xanduva • ISpain Iindaba Eziphambili • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Iinqwelomoya zeLufthansa Group zongeza iinqwelomoya ezintsha ezingama-440 zase-US, eSpain, ePortugal naseScandinavia ngeKrisimesi noSuku loNyaka oMtsha.
EYurophu, iindawo ekusingwa kuzo kumhlaba omkhulu waseSpain kunye neZiqithi zaseCanary, ePortugal nakwezinye iindawo ezinelanga ekusingise kuzo kummandla weMeditera kunye naseScandinavia zifunwa kakhulu.
Ukusuka kumaziko ayo eMunich naseFrankfurt kuphela, iLufthansa ibonelela ngaphezulu kwe-120 ngeenqwelomoya ezongezelelweyo ezinomthamo wezihlalo ezingama-25,000 ngexesha leKrisimesi.
E-US, eNew York kunye neendawo ekuya kuzo kwiphondo laseFlorida zibhukishwa rhoqo.
Ngokucwangcisa abahambi ngeenqwelomoya kufuneka baqwalasele kwimeko nganye ngokufanelekileyo ukungena kunye nemimiselo yokuvalelwa.
Iinqwelo-moya ze IQela leLufthansa (iLufthansa, iSwitzerland, iAustrian Airlines, iBrussels Airlines kunye neEurowings) banikezela malunga nezihlalo ezingama-80,000 ezongezelelweyo kwiinqwelomoya ezingama-440 ezongezelelweyo kwixesha elizayo leholide kunye noNyaka oMtsha. Iinqwelomoya ngoku zisabela ekonyukeni kweeveki ezinde kwimfuno yenqwelomoya ngexesha leeholide zeHolide ngokuphinda kuqaliswe iindawo eziya kuzo kunye nokwandisa ukuphindaphindeka koqhagamshelo olukhoyo okanye ukuthumela iinqwelomoya ezinkulu.
Ukusuka hubs yayo eMunich kunye Frankfurt iyodwa, iLufthansa ibonelela ngeenqwelomoya ezingaphezulu kwe-120 ezongezelelweyo ezinomthamo wezihlalo ezingama-25,000 ngexesha leKrisimesi.
E-US, eNew York kunye neendawo ekuya kuzo kwiphondo laseFlorida zibhukishwa rhoqo. EYurophu, iindawo zokusingwa kumhlaba omkhulu waseSpain kunye neZiqithi zaseCanary, ePortugal nakwezinye iindawo ezinelanga ekusingise kuzo kummandla weMeditera kunye naseScandinavia zifunwa kakhulu. Ukongeza kwezi ndawo, iindawo zokuchithela ikhephu eziqinisekileyo eLapland (emantla eFinland) zibuyile kwishedyuli yokubhabha. Ngaloo ndlela umntu ufikelela kwixesha leeholide kunye noNyaka oMtsha ukusuka eFrankfurt Ivalo naseKuusamo kunye naseMunich Kittilä eLappland naseTromsö eNorway - Northern Light inclusive.
Zonke iinqwelomoya zibhukishwa ngoko nangoko. Ngokucwangcisa abahambi ngeenqwelomoya kufuneka baqwalasele kwimeko nganye ukungena ngokufanelekileyo kunye nemimiselo yokuvalelwa.
Abahambi bangenza igalelo lomntu ekukhuselweni kwemozulu kwaye benze uhambo lwabo lomoya lwe-CO2 lungathathi hlangothi. Ukongeza kwinketho yokuphelisa inqwelomoya ngeeprojekthi ezikumgangatho ophezulu wemozulu, iindwendwe zaseLufthansa zisele zibhabha ngamafutha azinzileyo namhlanje. Iinqwelomoya ze Iqela leLufthansa zidibanise iinketho kwinkqubo yokubhukisha. Iiflaya rhoqo zingazifumana kwi-Miles & More app.